FLASH ကို [ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်း] နှင့်အတူ WINDOWS 8 ကို UEFI MODE ကို INSTALLING - WINDOWS ကို - 2019
Flash ကို [ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်း] နှင့်အတူ Windows 8 ကို UEFI mode ကို Installing
အဆိုပါ UEFI mode မှာက Windows ၏ installation ကတည်းက - အားလုံးပုံမှန်အတိုင်း installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခြားနားနည်းနည်းငါခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်း "ဝိုငျးဝနျး" ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ...
စကားမစပ်, ဆောင်းပါးကနေသတင်းအချက်အလက်ကို Windows 8, 8.1, 10 အဘို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းပုံရိပ်က ISO ကို Windows 8 (64bits);
USB flash drive ကို (အနည်းဆုံး4GB အထိ);
ရုဖု utility ကို (ရုံး site ကို :. //Rufus.akeo.ie/; တစ် bootable flash drive ကိုဖန်တီးသည်အကောင်းဆုံး tools တွေထဲကတစ်ခု);
အဘယ်သူမျှမ partitions ကိုအတူ hard drive ကိုသန့်ရှင်းရေး (ထို disk ပေါ်မှသတင်းအချက်အလက်များပါလျှင် - ကနှင့်ပုဒ်မတပ်ဆင်ခြင်းစဉ်အတွင်းစက်ရုံအစောပိုင်းကသင်ခဲ့ပြီးသော MBR () partitioning နေကြတယ်, အသစ်တစ်ခု layout ကို GPT မှရွှေ့ဖို့ disk ပေါ်မှာထုတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုကိုဖယ်ရှားနိုင်။ - ပုံစံမပါဘဲ) * မပွုနိုငျသညျ။
* - ငါမသိ - အနည်းဆုံးအားယခုအဘို့, သောနောကျကြလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးအတွက် data တွေကိုဆုံးရှုံးမှု, အန္တရာယ် - အတော်လေးကြီးမား။ တကယ်တော့ - ကအစားထိုး layout ကိုမဟုတ်ပါဘူးနှင့် GPT အတူ disk ကို format လုပ်။
2) (UEFI, ပုံ 1 ကိုကြည့်ပါ) တစ်ဦး bootable USB drive ကို Windows 8 ကို Creating .. :
စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ကို run ရုဖု utility ကို (ဥပမာ, Window Explorer ကိုပဲ, executable file ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Right-click ထောက်ပြီး context menu ထဲကသင့်လျော်တဲ့ option ကို select လုပ်ပါ);
နောက်ထပ်က USB port ကိုစ flash drive ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် utility ကိုရုဖုထဲမှာရိုက်ထည့်;
ထို့နောက်သင်တစ်ဦး flash drive ကိုအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားမည်သည့် Windows 8 ၏က ISO image ကိုသတ်မှတ်ရမည်,
partition ကိုအစီအစဉ်နှင့် system interface ကိုအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ထား: UEFI interface ကိုနှင့်အတူကွန်ပျူတာတွေအတွက် GPT;
သည်အခြား setting များက default left (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ -1) နှင့် "Start ကို" ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 1. ရုဖုချိန်ညှိခြင်း
တစ်ဦး bootable USB drive ကဖန်တီးပိုမိုသိရှိလိုပါကဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ယူနိုင်သည်
3) flash ကိုကနေ boot ဖို့ BIOS ကိုတက် Set
သင် BIOS ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဗားရှင်းကိုနှိပ်ဖို့ရှိသည်ကြောင်းတည်ပြီးသတ်တယ်ခေါင်းစဉ် "ခလုတ်" Give - (များစွာကွာခြားမှုရာပေါင်းများစွာရှိပါလျှင်မဟုတျပါ) ရိုးရိုးလက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဆင်တူ, အပြင်အဆင်များရေးသားခြင်းအနည်းငယ်ကွဲပြားဖြစ်ပေမယ့်နိယာမအစဉ်အမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်နိုင်သည်: သင်, BIOS Boot တက် device ကို specify နောက်ပိုင်းတွင်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် settings ကို save ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အောက်ကဥပမာမှာငါ ( ... ပုံ 2, ပုံ3ကိုကြည့်ပါ) လက်တော့ Dell က Inspirion အတွက် flash drive ကိုကနေ boot ဖို့ settings ကိုအောင်ဘယ်လိုပြပါလိမ့်မယ်:
တစ်ဦးက USB port ကိုစ bootable USB flash drive ကိုထည့်သွင်း;
: (ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှသော့ကဒီမှာကြောင်းအကြောင်းပိုမိုကွဲပြားခြားနားဖြစ်နိုင် F2 key ကို - ထိုမှတ်စုစာအုပ် (ကွန်ပျူတာ) ကို restart ချလိုက်ပါနှင့်, BIOS setup ကိုရိုက်ထည့်ပါ
, BIOS အပိုင်း BOOT (ဒေါင်းလုပ်) ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်;
UEFI mode ကို (Boot ကိုစာရင်း Option ကို) ကို enable;
Boot ကို Secure - (အားလုံးပါဝင်နိုင်) [Enabled] တန်ဖိုး ထား. ,
boot Option ကို # 1 - bootable USB flash drive ကို select လုပ်ပါ (လမ်းဖြင့်, ငါ့ဥပမာထဲမှာပြသရပါမည် "UEFI: KingstonDataTraveler ... ");
settings ကိုအောင်ပြီးနောက်, သငျသညျ Exit and save setting များကို, အဲဒီနောက်မှတ်စုစာအုပ်ပြန်လည်စတင်ရန်ရွှေ့ဖို့လိုအပ် (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 3) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 2. BIOS ကို Setup ကို - ထည့်သွင်း UEFI mode ကို
သင်္ဘောသဖန်း။ 3. BIOS ကိုအတွက် setting များကို Save
4) Windows 8 ကို UEFI Install mode ကို
ကွန်ပျူတာ, Setup ကို Windows ကိုစတင်မည်ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် - ထို BIOS ကိုအားလုံးညာဘက်မှန်ကန်စွာ configured နှင့်တုတ်နှင့်အတူနေလျှင်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အက Windows logo ကိုအနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံး 8 ပေါ်လာသည်, ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးပြတင်းပေါက် - ဘာသာစကား၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားကို Adjust နှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ...
သင်္ဘောသဖန်း။ 4. ဘာသာစကားများရွေးချယ်ရေး
လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်, Window နှစ်ခုလုပ်ရပ်များတစ်ဦးရွေးချယ်မှုကမ်းလှမ်း: အဟောင်းကို system ကို restore သို့မဟုတ်အသစ်တဦးတည်း (ကျနော်တို့ဒုတိယ option ကိုရှေးခယျြ) ကိုထည့်သွင်းရန်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 5. Install သို့မဟုတ် Upgrade
ဒုတိယ option ကိုရှေးခယျြ: Next ကို, သင် installation ကို2အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြသည် - "မိမိစိတ်ကြိုက်။ သာလျှင်သည် Windows installation ကိုပါဝါအသုံးပြုသူများအတွက်"
သင်္ဘောသဖန်း။ 6. တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးအစား
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း - အရေးကြီးဆုံးထဲကတစ်ခု: မှတ်သားနေပါသည် drive ကို! ငါ၏အမှု၌ drive ကိုစင်ကြယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းက - ငါပဲ-ဧရိယာမှတ်သား Next ကိုကလစ်လုပ်ပါကိုရွေးတော်မ ...
သင့်အမှု၌, သင် disc ကို format ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ (Formatting ကနေဒေတာအားလုံးကိုဖျက်!) ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, MBR နှင့်သင်၏ disk ကို layout ကိုပါလျှင် - Windows မှာမှားယွင်းမှုတစ်ခုအားငါပေးမည်: ပုံစံ GPT ရှိထုတ်လုပ်သည်အထိထပ်မံတပ်ဆင်မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ...
သင်္ဘောသဖန်း။ 7. တစ်ဦး Hard Disk ကို Partitioning
သောတပ်ဆင်ခြင်းကို Windows စတင်ပြီးနောက်တကယ်တော့ - ကွန်ပျူတာကို restart သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ installation အချိန်ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားနိုင်သည်ဒီတော့ထွက် installed နှင့်နေသောသင့် PC ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, အက Windows ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 8. Windows 8 ကို Install
ကို restart ပြီးနောက်က The installer ကိုအရောင်များကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ကွန်ပျူတာ၏နာမကိုပေးစေခြင်းငှါသင်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။
အရောင်များသည် - ကကွန်ပျူတာ၏အမည်နှင့် ပတ်သက်. , သင့်အရသာဖို့ဖြစ်ပါတယ် - အကွံဉာဏျတဦးအပိုင်းအစပေး: (* ရုရှားဇာတ်ကောင်ကိုမသုံးကြဘူး) လက်တင်အက္ခရာများအတွက် PC ကိုခေါ်ပါ။
* - တစ်ခါတစ်ရံထိုနိုင်တဲ့ coding နှင့်အတူပြဿနာများ၏အမှု၌, "kryakozabry" အစားရုရှားဇာတ်ကောင်များ၏ပြသပါလိမ့်မည် ...
သင်္ဘောသဖန်း။ 9. Personalisation စာ
ယင်း setting တွင်, သငျသညျရိုးရိုး (အားလုံးအပြင်အဆင်များ, မူအရ, Window တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်) ခလုတ်ကို "ကိုအသုံးပြုခြင်းက default settings ကို" ပေါ်တွင် click လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 10. Options ကို
Next ကိုသင်အကောင့်ကို (ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်သူကိုအသုံးပြုသူများက) ကို set up ဖို့တောင်းနေကြသည်။
ကျနော့်အမြင်၌ဒေသခံတစ်ဦးအကောင့်သုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏ (အနည်းဆုံးမရသေးသော ... ) ။ တကယ်တော့ကျနော်တို့အမည်တူ၏ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အကောင့်နဲ့အလုပ်လုပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ဒီဆောင်းပါးကိုတွေ့မြင် .:
သင်္ဘောသဖန်း။ 11. Accounts ကို (ရဲ့ login)
ထိုအခါသင်ကစီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်များအတွက် name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စကားဝှက်မလိုအပ်လျှင် - လွတ်ထွက်သွားကြပါသည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 12. အကောင့်များအတွက် name နဲ့ password ကို
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းနီးပါးပြည့်စုံဖြစ်ပါသည် - မိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်, က Windows setup ကို parameters များကိုပြီးဆုံးနှင့်နောက်ထပ်အလုပ်အတွက် desktop ပေါ်မှာရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေး ...
သင်္ဘောသဖန်း။ တပ်ဆင် Completing 13. ...
ပြီးတာနဲ့ install လုပ်ထား, များသောအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းကို update စတင်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကိုအကြံပြု: